Ahoana ny fomba fanesorana ny maody fiomanana amin'ny fahitalavitra 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ireo izay matetika mijery fahita amin'ny fahita any an-trano dia nahatsikaritra fa aorian'ny fotoana voafetra tsy misy hetsika, dia maty tampoka ny fahitalavitra ary mandeha amin'ny maody fiomanana, toy ny hoe nanindry ny bokotra mena tamin'ny fanaraha-maso lavitra isika. Rehefa mitranga izany dia tsy tokony taitra isika ary mieritreritra fa vaky ny fahitalavitra: fihetsika mahazatra tanteraka izany, noforonin'ireo mpanamboatra fahitalavitra hamonjy angovo rehefa tavela ny fahitalavitra tsy misy manova fantsona na manao fandidiana hafa mandritra ny fotoana maharitra (matetika aorian'ny adiny 2).
Raha tsy tianay ity fihetsika ity na te-hijery televiziona tsy an-kijanona na dia mandritra ny adiny 3 mahery aza izahay dia hasehoko anao amin'ity torolàlana ity ny fomba fanesorana ny maody miantona amin'ny fahitalavitra amin'ny marika TV lehibe, mba hahafahanao mifehy avy hatrany ny maody miantona mandeha ho azy amin'ny toe-javatra sasany na amin'ny tranga sasany takiana amin'ny fahitalavitra foana (ohatra, TV amin'ny fivarotana, TV mitazona orinasa fivarotana olona antitra na zaza).
Ahoana ny fomba famonoana ny maody mailo amin'ny fahitalavitra
Araka ny voalaza tao amin'ny topi-maso dia omena amin'ny fahitalavitra maoderina sy fahitalavitra maoderina ny endri-fizarana mandeha ho azy mba hahamora kokoa ny fitehirizana herinaratra rehefa ajanona ela loatra ka tsy misy fifandraisana. Na izany aza, ny mpanamboatra tsirairay dia manome ny mety hanitsiana io asa io (mampitombo ny fotoana fiandrasana) ary koa amin'ny tapaho tanteraka izy, mba hahafahanao mankafy fahitalavitra tsy voafetra. Amin'ny tranga farany, na izany aza, tsara ho anao ny mahatadidy ny hamono azy io tsindraindray amin'ny fanaraha-maso lavitra, hitsitsiana angovo sy hanitarana ny androm-pahazavana ao amin'ilay fitaovana.
Esory ny LG TV amin'ny maody mijanona
Raha manana LG smart TV isika dia afaka manala ny maody miantona mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra gear amin'ny fanaraha-maso, dia alefa any amin'ny menio Ireo toe-javatra rehetra, safidio ny menio General ary farany manindry ny singa fameram-potoana.
Ao amin'ny varavarankely vaovao izay hisokatra dia esorinay ny singa Amiala rehefa afaka adiny 2 fipihana eo amboniny ary, raha toa ka efa nametraka famonoana famonoana hafa izahay dia manamarina ao amin'ny menio Off timer, hahazoana antoka fa napetraka ilay entana deactivate. Raha tsy izany, azontsika atao koa ny manamarina ilay feo Mode eco (eo amin'ny menio General) raha miasa ny feo Fanidiana avy hatrany, mba hahafahanao mamono azy.
Esory ny telefaona Samsung amin'ny maody mailo
Samsung TV dia malaza be ary mpampiasa marobe no azo antoka fa nahatsikaritra farafaharatsiny farafaharatsiny fa ny maody fiomanana mandeha ho azy mihetsika. Raha anisan'ireo te-hanafoana azy ianao dia afaka miroso amin'ny fanindriana ny bokotra sakafo ny fanaraha-maso lavitra, mitarika antsika amin'ny làlana Ankapobeny -> Fitantanana ny rafitra -> Fotoana -> Fotoana fatoriana ary manamarina raha tsy mandeha ny singa Fikirakira (tokony hapetraka 2 ora aorin'izany: andao hanova ny toe-javatra NIALA).
Raha tsy mandeha ny fomba etsy ambony, dia mila manamarina isika raha misy ny fifehezana ny standby ao amin'ny fikirakirana angovo. Hanohizantsika ny sakafoandao horaisintsika ao Vahaolana maintso na in General -> Vahaolana ekolojika ary zahao raha miasa ny feo Fanidiana avy hatrany, mba hahafahany ho kilemaina maharitra.
Atsaharo ny maodely Sony amin'ny alàlan'ny maody mailo
Sony TVs dia afaka manana ny rafitra miasa manokana sy ny TV Android vaovao: ny rafitra roa dia mamonjy herinaratra ary mandeha ho azy aorian'ny fotoana voafaritra tsy misy fampidirana. Mba hamonoana ny fiandrasana amin'ny fahitalavitra Sony tsy misy Android TV, tsindrio fotsiny ny bokotra Home / Menu amin'ny fanaraha-maso, alao ny lalana Fikirana rafitra -> Eco ary zahao raha miasa ny fahitalavitra tsy miasa, mba hahafahanay hanafoana azy.
Raha manana televiziona Sony misy Android TV izahay dia tsindrio ny bokotra Casaandao handray ny lalana Fikirana -> Angovo -> Eco ary vonoy ny maody fiomanana. Raha tsy mandeha izy na maty ny efijery aorian'ny fotoana iray dia tsy maintsy dinihinay ihany koa ny fikirakirana manonofy, fisehoan-javatra Android izay mampiseho mpamonjy efijery raha sendra tsy mandeha intsony ny fotoana. Hanohizana, andao handray ny lalana Fikirana -> TV -> Daydream ary alao antoka fa eo akaikin'ny singa Rehefa ao anaty fomba fatoriana eo ny feo Mayo.
Ny sasany amin'ireo fahitalavitra marani-tsaina maoderina Sony dia manana sensor misy ihany koa, izay mahatsikaritra ny fisian'ny olona manoloana ny fahitalavitra ary, raha misy ny fizahana ratsy, dia mametraka ny fahitalavitra ho maody mailo izy. Ity fampiasa an-tany ity dia mbola azo kilemaina amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Menu, mitondra antsika eny an-dalana. Fikirana -> Fikirana rafitra -> Eco -> Sensor de presence ary apetraho amin'ny NIALA.
Esory ny Philips TV tsy hijanona
Philips TVs dia afaka mampiditra rafitra fikirakirana tompony na Android TV ihany koa, ka tsy maintsy hiroso amin'ny fomba hafa isika. Ho an'ireo izay manana fahitalavitra Philips tsy misy Android TV, azo atao ny manafoana ny maody miantona amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Menu / Home amin'ny fanaraha-maso lavitra, manokatra ny menio manokana O General, fanamafisana fameram-potoana ary farany manokatra ny fidirana Mivadika, izay tsy maintsy hametrahantsika ny fiasan'ny NIALA.
Raha vaovao kokoa ny TV Philips, azontsika esorina ny maody fiomanana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra sakafo, mitarika antsika amin'ny làlana Fikirana -> Fikirana Eco -> Timer-torimaso ary apetraho ny timer 0 (aotra).
Esory ny Panasonic TV amin'ny Standby
Raha manana TV Panasonic izay vonoina isika aorian'ny fotoana voafaritra iray dia azontsika atao ny manamboatra azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fameram-potoana (misy amin'ny maodely maro an'ny fanaraha-maso lavitra Panasonic) ary, ao amin'ny menio vaovao hisokatra, ny sisa hataontsika dia ny manafoana ilay zavatra Fitazomana mandeha ho azy.
Tsy misy bokotra famantaranandro eo amin'ny lavitra ny fahitalavitra Panasonic? Amin'ity tranga ity dia azontsika esorina ny standby manaraka ny fomba mahazatra, izay misy ny fanindriana ny bokotra sakafo amin'ny fanaraha-maso lavitra, sokafy ny menio Timer ary apetaho ny Auto Power Off NIALA na ny azy 0 (aotra)
Raha manelingelina antsika ny maody fiomanana amin'ny fahitalavitra rehefa mijery sarimihetsika lava lava na mandritra ny fotoam-pivoriana mahery vaika (izany hoe, rehefa mijery fizarana maro amin'ny andian-tsarimihetsika mitohy tsy tapaka), ny fampandehanana ny maody fiandrasana dia mety ho vahaolana mahomby. ka tsy mila mikasika ny fanaraha-maso lavitra ianao. farafahakeliny indray mandeha isan'ora mba "hahatakatra" ny fahitalavitra fa eo isika ary mijery zavatra isika. Misaotra an'ity toro-lalana ity azontsika atao vonoy ny standby amin'ny fahitalavitra amin'ireo marika lehibe, fa ny dingana efa natoronay anao azo lalaovina amin'ny fahitalavitra maoderina, tsy mila mandray ny fanaraha-maso lavitra fotsiny isika, mampiditra ny fikirana ary manamarina ireo singa tsirairay mifandraika amin'ny fanakatonana mandeha ho azy ny fahitalavitra: Standby, fitsitsiana angovo, Eco, Eco Mode na Timer.
Miova ny fomba fiasa maro miankina amin'ny rafitra fiasa napetraka; Mba hahatakarana avy hatrany hoe inona ny rafitra misy eo alohanay sy ny fomba hirosoana, dia mamporisika anao izahay mba hamaky ny torolalanay ihany koa Ahoana no hahalalana raha fahita amin'ny fahitalavitra Smart izany mi Smart TV tsara indrindra ho an'ny Samsung App sy Sony App System.
Manana olana amin'ny mode standby ve isika sa manidy ny PC? Amin'ity tranga ity dia manolotra anao izahay handalina ny fifanakalozan-kevitra amin'ny famakiana ny lahatsoratray. Ny fampiatoana sy ny fifatorana amin'ny solosaina: ny fahasamihafana sy ny fampiasa.